Kalsooni iyo ammaan - Örnsköldsviks kommun
- Kalsooni iyo ammaan
Haddii uu dab kaco ama shil halis dhaco adiga waa inaad soo wacdaa lambarka degdega 112. Lambarka wuxuu kugu xiriiri SOS Alarm oo kuu soo diri karo boliis, ambulans, baabuurka dab demiska ama wixii markaas loo baahanyahay sidaa caawinaad degdeg u heshid. Bogga internetka oo SOS alarm waxaa ka heleysaa warbixin oo dhowr luqadood ku qoran . Meeshaas baa adiga warbixin ka heleysaa oo sida u soo seenyaalen kartid iyo warbixinta adiga lagaaga baahanyahay sidaa caawinaad degdeg u sax ah u heshid.
Haddii wax halis dhacdo
Haddii ey arrin halis ka dhacdo degmada oo tusaale ahaan sun oo gaas ah soo faafto, waxaa la jeerin seenyaal digniin. Seenyaal digniin oo ciyaayo 7 ilbidhiqsi, oo markaas aamusnaanaayo 14 ilbidhiqsi. Markaas markale baa maqli dhawaaq oo soconaayo 7 ilbidhiqsi. Sidaan bey ahaan wakhti ugu yaran 2 minid.
Markaa adiga maqashid seenyaalkaan digniinta waa inaa gudaha gashaa iyo xirtaa ilbaabaha, dhaaqadaha iyo meelaha hawada. Markaasna waxaa shideysaa raadiyaha oo degmadaada (P4) sidaa warbixin uga hesid waxa dhacay iyo waxaa adiga u baahantahay inaad suubisid.
Warbixinta arrimaha halista oo booga internetka degmada
Haddii uu dhaco shil ama waxkale oo saameynkaro bulshada ku nool Örnsköldsvik waxaa ku soo qoreynaa bogga degmada iyo facebooka (warbixintaas waxey ku qoran tahay iswiidhish). Waxey ahaan kartaa tusaale ahaan tubo biyo oo biyihii soo deyneyso, dab weey ama hawo xun oo korontada goyso.
Gurikasto waa inuu ugu yaraan lee yahay hal seenyaalo oo dabka. Seenyaaladaas waa inuu ku xirnaado saqafka guriga gudahiisa. Markuu dareemo qiic iyo kuleel badan waxaa yeeraayo seenyaalo oo digniin siinaayo dadka guriga ku jiro. Iska hubi inaad seenyaalada aad ka maq leeysid qolka jiifka iyo xusuusnaaw inaad batariga ka badashid marmarka qaarkood.